अमेरिकाको एक सहरमा मेयर बन्यो बाख्रो ! — SaharaPati
अमेरिकाको एक सहरमा मेयर बन्यो बाख्रो !
एजेन्सी । अमेरिकामा एक बाख्रालाई मेयर बनाइएको छ । त्यहाँको बरमोन्टस्थित फेयर हेभन सहरमा मेयरका लागि १६ वटा अन्य जनावर पनि उम्मेदवार बनाइएका थिए। उम्मेदवारका लागि कुकुर र बिरालालाई पनि समावेश गराइएको थियो।
अन्तिममा तीन वर्षको लिंकन नामको बाख्रा सहरको मेयर बन्यो। लिकंन १३ भोट ल्याएर मेयर बनेको हो।उनको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी सैम्मी नामको कुकुरले १० भोट लिएर हार खानुपर्‍यो। अरु उम्मेदवारहरुले जम्मा ३० भोट मात्र प्राप्त गरे। लिंकनको कार्यकाल १ वर्षको हुनेछ।
लिंकनलाई टाउन मिटिङ डेको अवसरमा मेयर बनाइएको हो।लिंकनले मेयरको पदभार पनि सम्हालिसकेको छ। अब लिंकन सहरमा हुने कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भएर कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नेछ। फेयर हेभनमा करिब २५ सय मानिसको बसोबास छ। यहाँ अहिलेसम्म कोही मेयर बनेका छैनन्।
टाउन म्यानेजरका अनुसार जनावरलाई सहरको मेयर बनाउने आइडिया उनलाई उत्तरी मिसिगन राज्यले दिएको थियो। सोही अनुसार उनले स्थानीयस्तरमा खेलकुद मैदानका लागि रकम जुटाउन यो तरिका अपनाएका बताएका छन्।
विचित्र संसार सम्बन्धित
अविवाहित युवतीले जब भिडियो हेरेर बच्चा जन्माउन खोजिन्…‍‍
आफैले पालेको सिंहको शिकार बने सिंह पाल्ने व्यक्ति
क्यालिफोनिर्यामा भेटियो अचम्मको माछा, पहिलो पटक देखिएको वैज्ञानिकको भनाइ
युवतीलाई टाउको दुख्यो, औषधी खाएर सुतिन्, उठ्दा थाहा भयो कि आमा बनिसकेकी छिन्